ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (linear ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)such အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.Since ယင်း ပစ်လွှတ်, AOX-M စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator hအဖြစ် ဖူး စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးမြှင် နှင့် တိုးတက် အပေါ် ယင်း အရည်အသွေး အဖြစ် ကောင်းစွာ အဖြစ် ယင်း အင်္ဂါရပ်များ ဖြတ်. cအပေါ်tinuous တိုးတက်ရေး အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ R & D ဦးစီးဌာန။
1. မော်တော် ofAOX-M စီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့ပေါင်းစုံအလှည့် actuator
AOX-M စီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့ပေါင်းစုံအလှည့်တွင် / ချွတ်နှင့်အသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုရိုးရှင်းကနေအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းကို actuatorcan ။
1.AOX-M ပေါင်းစုံအလှည့် actuatorand အဆို့ရှင်ကိုစနစ်တကျ install နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီစက်တပ်စီးရီးဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု။
6.AOX-M ပေါင်းစုံအလှည့် actuatorand ဆို့ရှင်စက်တပ်စီးရီးအဝေးထိန်းနဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
မေး: သင်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် yourAOX-M စီးရီးအဝေးထိန်းဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
မေး: ငါတို့သည်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator စက်တပ် yourAOX-M စီးရီးအဝေးထိန်းစိတ်ဝင်စားလျှင်ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
hot Tags:: ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်